पवित्र भूमीमा मौलाएका विष वृक्षहरु - प्रभात खबर
२०७८ श्रावण ३०, शनिबार ०७:५७
यद्यपि,राष्ट्रियतालाई फरक कोण र फरक मनोविज्ञानबाट हेर्ने गरिएको छ । राष्ट्रियताको मापदण्ड जेसुकै तरिकाले लिइए पनि भुगोलसंग जोडिएका जनताको पहिचान गुम्नु हुँदैन । स्वाभिमान र श्रद्धामा आँच आउनु हुँदैन । आन्तरिक राष्ट्रियता सबल हुन सकेन भने बाह्य राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ । एउटा कमजोर भए अर्को कमजोर हुनु स्वभाविक नै हो ।
नेपालमा देशभक्तिको भावना नेपाल अंग्रेज युद्धसंगै विकसित भएको देखिन्छ ।
त्यतिवेलाको राष्ट्रियता स्वाभीमान र पहिचानसंग जोडिएको थियो । त्यही स्वाभीमान र
पहिचानले आज हामी नेपालीहरु विर गोर्खाली र स्वाभीमानी नेपाली भएर गर्वका साथ
बाँच्न सफल भएका छौँ ।
हाम्रा पूर्खाहरुको त्याग र तपस्याले आर्जेको मुलुक हो नेपाल । त्यो त्याग, तपस्या र स्वाभीन हिँजो पनि थियो । आज पनि छ । र, भोलि
पनि रहनेछ । केही सीमित व्यक्तिहरुको कुत्सित स्वार्थले हाम्रो स्वाभीमान गुम्न सक्दैन। र, गुम्नु हुँदैन पनि । यद्यपि, अहिले नेपालको राष्ट्रियता निकै कमजोर हुनपुगेको देखिन्छ । नेपालको राष्ट्रियतामाथि विदेशी शक्तिहरुले धावा बोल्नु योगतिलो प्रमाण पनि हो । एकातिर छिमेकी देश भारतका कयौँ गतिविधिहरुले हाम्रोराष्ट्रियतामाथि गम्भीर चोटहरु पुग्दै गएका छन् भने अर्कोतिर पश्चिमा शक्तिहरुविभिन्न वाहानामा हाम्रो देशमा छिर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । विभिन्न आश, प्रलोभनमापारेर विभिन्न वाहानामा सत्ता परिवर्तन गराउँदै धार्मिक पक्षलाई तहस नहस गराउनेखेलमा उनीहरु सामेल भइरहेका देखिन्छन् । यतिवेला सचेत देशभकत नागरिकले यस्लाईनजरअन्दाज ग¥यो भने भोलिको दिन भयावहको स्थिति आउने कुरामा कुनै दुइमत नै हुनेछैन ।
खैर १ जनता जतिसुकै जनार्दन भए उनीहरुकै विश्वासले सत्तामा पुगेका विभिन्नदलका शीर्ष नेताहरुबाट नै ठूलाठूला राष्ट्रघात हुनु भनेको नै नेपालको राष्ट्रियता धरापमा पर्नु हो । आखिर देश भूगोल मात्र होइन जनता पनि हो । जुन कुराले जनताको हित हुन्छ त्यही कुरोले देशको हित गर्ने हो । जनताको अधिकार भन्नु के देशको अधिकार होइन र रु भूगोल कही जाँदैन । त्यो स्थीर भएर रहीरहन्छ । हराउने केवल जनता मात्र हो । जनता हराउनु भनेको उनीहरुको पहिचान हराउनु हो । हामी पहिचान विनाको राष्ट्रियताको खोजिमा छौँ कि पहिचान सहितको राष्ट्रियताको खोजिमा छौँ रु एकपटक गम्भीर भएर सोँच्ने हो कि ?
ज्यूँदो हुनुको वास्तविकता स्वास फेर्नु मात्र होइन । ज्यूँदो हुनु भनेकै चल्मलाउनु, तरंगिनु र लहराउनु पनि हो । तैपनि, कयौँ मान्छेहरु ज्यूँदो
हुँदाहुँदै पनि मरिरहेका छन् । कयौँ मान्छेहरु मरेर पनि बाँचिरहेका छन् । अहिले हामी कुन अवस्थामा बाँचिरहेका छौँ रु यो प्रश्न हरेक नेपालीहरुले एकपटक गहिरिएर सोच्नु पर्ने वेला आइसकेको छ । हामी बाँचेर पनि मरिरहेका छौँ भने हाम्रो अस्तित्व नै छैन भन्दा पनि हुन्छ । हामी मरेर पनि बाँच्न चाहान्छौँ भने वास्तवमा त्यो नै हाम्रो स्वाभीमान र वास्तविक पहिचानसंग जोडिन पुग्छ ।
देश दलदलको दवदवाभन्दा कहिल्यै पनि माथि उठ्न सकेन । माथि उठ्न कहिल्यै पनि दिइएन । हामीले सबै कुराहरु भोग्दै आएका छौँ र भोग्दै जानेछौँ पनि । तैपनि, हाम्रो भोगाइले हामीलाई कहिल्यै पनि गतिलो पाठ सिकाउन सकेन । हामी आँखामा चश्मा र कानमा ठेटी कोचेर सभ्यताको दुहाइ दिदैँ गयौँ । तर, त्यो सभ्यताले हामीलाई नेपाली भएर बाँच्न सिकायो कि विदेशी भएर नाँच्न सिकायो ? त्यो कुरामा हामीले कहिल्यै पनि ध्यान दिन चाहेनौँ ।
विदेशी ऐजेन्डा बोकेर रमाउने हाम्रा नेतागणहरुको छुद्र मानसिकताको पछि लाग्दैमा हामीले करिव ३ दशकसम्म यो देशलाई भोटे ताल्चा लगाइ रह्यौँ । विदेशी गुणगान र बखानको सिलसिलामा हामी हाम्रो भाषा र संस्कृतिलाई ओझेल पार्दै गयौँ । विदेशी प्रभुको इशारामा देशका अमुल्य सम्पतिहरुलाई उनीहरुकै जिम्मा लगाउँदै गयौँ । परिणामस्वरुप हामी क्यारम बोर्डका गोटी बन्दै गयौँ । गोल गोल भन्दैमा हाम्रो राजनिती भद्रगोल बन्दै गयो । तीनतिर
फर्केका नेताहरुका चेहराहरु दिग्भ्रमित बन्दै गए ।
वास्तविक राष्ट्रियता यहाँ ओझेल पर्दै गयो । र, ओझेल पारिदैँ गयो । अब कतिन्जेल हामीलाई राष्ट्रियताको दुहाइ दिएर झुक्याउँछन् यी राजनैतिक दलहरुले ? पक्कै पनित्यो हाम्रो चेतनाको स्तरमा भर पर्ने कुरा हो । हामी हाम्रो चेतनालाई विदेशी संस्कृतिसंग जोडेर हेरिरहेका छौँ । हाम्रो मानसिकता नै गरिवी बनेको छ ।
त्यही गरिवी मानसिकताले नेपाल आमाको फाटेको बस्त्र हेरेर हामी हाँस्न खोज्दैछौँ ।
आमाको फाटेको लुगा देख्दा हाँस्ने सन्तानहरुले आमालाई कहिल्यै पनि खुसी
दिन सक्दैनन् । हामीसंग जे छ, सबथोक छ । सबथोक पाएका हामी नेपालीहरु सुनको कचौरा
लिएर माग्न जाने तरखरमा देखिदैछौँ । जल, जमिन र जडिबुटीको भण्डार भएको मेरो देशले आफूलाई चिनाउने धेरै आधारहरु छन् । संसारकै शिर भएको मेरो देश झुक्नु भनेको संसारकै शिर निहुरिनु होइन र रु गौतम बुद्धको शान्तिको उद्घोष गर्ने मेरो देशमा विदेशी सैनिकका परेडहरु गुन्जिनु कहाँसम्म जायज होरु तैपनि, अझैँसम्म हामीमा त्यो चेत आएको छैन ।
हामी अर्कैको आड र भरोसामा चल्न मन पराउँछौँ । अर्कैको इशारामा हिड्न अभ्यस्त भइसकेका हामीहरुलाई आफूमा फिटिक्कै विश्वास छैन । कतिन्जेलसम्म हामी अर्कैका गोटी भएर बाँच्न चाहान्छौँ रु हामीलाई जोडने र फोड्ने सबै अरुहरुले नै गरिरहेका छन् । जवसम्म हामी आफूप्रति विश्वास गर्दैनौँ तवसम्म हामी गुलामी मानसिकताले बाँच्न बाध्य हुनेछौँ । जवसम्म हामी गुलामी मानसिकताले बाँचिरहन्छौँ तवसम्म हाम्रो राष्ट्र र राष्ट्रियताको धरातल कमजोर हुनेछ । जन्मदिने आमालाई रुवाएर सम्पतिमा लुछाचुडि गर्ने सन्तानहरु कहिल्यै पनि खुसी भएर बाँच्न सक्दैनन् ।
आमाको आर्शिवादले मात्र सन्तानहरुले सुखभोग गर्न पाउँछन् । र, शान्ति र अमनचयनको स्वास फेर्न पाउँछन् । तर, आज नेपाल आमाको आँखामा आँसु छचल्कि रहेको छ । कसैले पनि देख्न चाहन्न । सबैलाई आफ्नै दल र वादको चिन्ता छ । त्यही दल र वादको बढ्दो विभेदले पछिल्लो अवस्थामा विवाद वढ्दै गइरहेको छ । घुम्ने मेचमाथिका अन्धा मान्छेहरुको दवदवाकै कारण विदेशी शक्तिहरुले खेल्ने
प्रशस्त ठाउँहरु पाएका छन् । जतिसुकै विदेशी हस्तक्षेप भए पनि हाम्रो हाम्रो स्वाभीमान कहिल्यै डगेन । र, डग्ने छैन पनि । स्वाभीमानी नेपाली भएर बाँच्नु पाउनु हाम्रो अहोभाग्य नै हो । तैपनि, पछिल्ला दिनहरुमा नेपाल र नेपालीहरुको स्वाभीमानलाई डगाउने प्रयास गरिदैँछ । नेपाल र नेपाली परिवेशलाई भत्काउने प्रयास गरिदैँछ । पुण्य र पवित्र भूमिमा विष बृक्षहरु झागिन खोज्दैछन् । यो देशभक्त नेपालीहरुको लागि कदापी सह्ैय हुन सक्दैन । राष्ट्रियताको जति नै दुहाइ दिए पनि आन्तरिक रुपमा राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गयो भने बाह्य शक्तिहरुले चलखेल अवश्य नै
स्मरण रहोस, विदेशी शक्तिको जुठो भात भन्दा जन्मदिने आमाको सयौँ लात
प्यारो हुन्छ । हाम्रा पुर्खाहरुको त्याग र तपस्याले आर्जिएको मुलुक कहिल्यै पनि
गुलाम हुन जानेन् । र, सक्दैन पनि । हामी नेपालीहरुको स्वाभीमान सदैव उचो थियो
। र, रहँदै जानेछ पनि ।